Amamodeli angu-12 aphezulu amawashi abesifazane bangempela anenani elilinganiselwa esigidini esi-1, athandwa kakhulu abantu abaningi - Mitadoor Đồng Nai
Home/Hỏi Đáp/Amamodeli angu-12 aphezulu amawashi abesifazane bangempela anenani elilinganiselwa esigidini esi-1, athandwa kakhulu abantu abaningi
Amamodeli angu-12 aphezulu amawashi abesifazane bangempela anenani elilinganiselwa esigidini esi-1, athandwa kakhulu abantu abaningi
Ingabe ningabesifazane abafuna ukuzithengela iwashi lemfashini langempela, ikhwalithi enhle kanye nenani elithengekayo? Ungaphuthelwa uhlu lwamawashi angempela angu-12 angempela, adume kakhulu abesifazane anenani elingu-1 million kwa-Mitadoor Đồng Nai VN okwamanje!
I-Elio Women’s Watch ES050-01
I-Elio Women’s Watch ES058-01 (2 izibuyekezo)
I-Elio Women’s Watch ES028-01
I-Elio Women’s Watch ES040-01 (1 isibuyekezo)
I-Elio Women’s Watch ES051-01 (3 izibuyekezo)
I-Nakzen Women’s Watch SL4043LREBN-7N0 (1 isibuyekezo)
I-Elio Women’s Watch EL028-01
I-Elio Women’s Watch ES038-01
I-Elio Women’s Watch ES063-02
I-Elio Women’s Watch ES035-01 (1 isibuyekezo)
I-Elio Women’s Watch ES037-01
I-Nakzen Women’s Watch SS4056L-7N0
Ngaphakathi Iqoqo le-Muse yethulwa emakethe ekuqaleni kuka-2021 ngu-Elio, the I-Elio Women’s Watch ES050-01 inomklamo wesifazane, omnandi futhi wobusha ngokulinganayo.
Idayamitha yobuso bewashi 30 mm, ububanzi bentambo 13 mm, lokhu kuwumkhiqizo ofanele abesifazane abanomjikelezo wesihlakala cishe 15 – 15.5 cm. Izinto ezakha i-bezel nebhendi yewashi zenziwe nge-alloy eqinile, eqinile enamandla okuthwala futhi kulula ukuyihlanza.
Leli washi line-coefficient yokumelana namanzi 3 ATM ukhululekile ukugqoka kokubili emvuleni nalapho ugeza izandla.
Ngomklamo olula kodwa obucayi ngokulinganayo oqoshiwe wobuso bedayimane, i I-Elio Women’s Watch ES058-01 Lo mkhiqizo omuhle kakhulu uwumkhiqizo womkhiqizo othengiswa kuphela kwa-Mitadoor Đồng Nai VN kanye ne-Mobile World.
Leli washi lifanele abesifazane abanomjikelezo ophansi wesihlakala 15.5 cm, enobubanzi bobuso 28 mm nobubanzi bentambo 14 mm. I-bezel yewashi yenziwe nge-alloy eqine ngokwedlulele esiza ekuvimbeni i-oxidation, futhi ibhendi eqinile necwebezelayo yensimbi engenasici iqinile kuzo zonke izimo zezulu.
I-coefficient engangeni manzi 3 ATM Ifakwe ewashini ukuvimbela amanzi ukuthi angangeni ewashini lapho lina noma ukugeza izandla. Nokho, udinga ukuqaphela ukuthi ungaligqoki iwashi lapho ugeza, ubhukuda noma utshuza!
❝Ngithengele umama isipho ngesikhathi sokuthengisa, ngakho intengo inengqondo kakhulu. I-spa ingcono kunokulindelekile. Abasebenzi abalalelisisayo.❞
I-Tran Quoc Quyet yekhasimende – Kuthengwe eMitadoor Đồng Nai VN
❝Umkhiqizo muhle, umbala ufana nesithombe, ibhande kulula ukulungisa ngaphandle kokusika amehlo, lifanele noma yisiphi isandla esincane. Abasebenzi benkonzo bazimisele kakhulu❞
Ha Sakura –
Uma ufuna iwashi elithuthukisa ukuzethemba kwakho, ungaphuthelwa yimodeli Iwashi labesifazane le-Elio ES028-01 ngomklamo wokunethezeka kodwa wesimanje ohlanganiswe ngamatshe ngokulinganayo, ofanele amantombazane athambile.
Leli washi lingelakhe Ukunyakaza kuvela eJapane, iqinile ngokuhamba kwesikhathi, ngokuzinza okuphezulu nokunemba.
Akugcini lapho, igobolondo langaphandle nohlaka kuyatholakala kokubili Ukumelana nomthelela omuhle, i-anti-oxidation ephezulu ibasiza ukuthi bahlale becwebezela. Ingilazi yaleli washi le-analog iphinde ibe sobala ngokwedlulele futhi inobunzima obuphakeme, ikunikeza ukuthula kwengqondo okuphelele lapho usebenzisa.
Omunye umkhiqizo ohlaba umxhwele ovela eqoqweni le-Elio’s Muse imodeli I-Elio Women’s Watch ES040-01 inomklamo omncane, ubuso obuyindilinga obulula, inhlanganisela yebhande lentshakaza ewubukhazikhazi, ifaneleka kakhulu abesifazane abasebasha.
Leli washi linobubanzi bokudayela 26 mm, ububanzi bentambo 5 mm. Ibhande kanye ne-bezel impahla yenziwe nge-alloy ehlala isikhathi eside, i-anti-corrosion enhle ne-anti-oxidation, ikhawulela ukulimala ngesikhathi sokusetshenziswa.
I-Elio ES040-01 inesici sokumelana namanzi 3 ATM, ungaqiniseka ukuthi uzophatha iwashi lakho emvuleni futhi ugeze izandla ngaphandle kokukhathazeka ngomonakalo.
I-Elio Women’s Watch ES051-01 inikeza abasebenzisi umuzwa wokuqiniseka ngedizayini elula kodwa enhle ngokulinganayo, elungele abesifazane ukuba bayiphathe lapho beya emsebenzini noma bebambe iqhaza ekuphumeni, emicimbini, …
Leli washi liyinketho efanelekile kwabesifazane abanomjikelezo wesihlakala cishe 16 – 16.5 cm. Ngempahla yekesi lewashi elenziwe ingxubevange eqinile, okusiza ukuqinisekisa ukuthi ukunyakaza kwangaphakathi kuhle futhi kuhlala isikhathi eside.
Ngaphandle kwalokho, ibhande lokubuka lenziwe kusuka Material Insimbi engagqwali ecwebezelayo, i-anti-oxidation esebenzayo, iletha induduzo kumsebenzisi.
❝Iwashi elihle kakhulu, inani elihle lemali, ibhande eliqinile, laneliseke kakhulu, abasebenzi bokulethwa abashisekayo❞
Thuy Tien ikhasimende – Kuthengwe eMitadoor Đồng Nai VN
Njengomkhiqizo ovela kumkhiqizo ohlonishwayo ohamba phambili i-Nakzen ezweni lezimbali ze-cherry, Iwashi labesifazane lase-Nakzen SL4043LREBN-7N0 Inedizayini yebhande lesikhumba eliqinile, elihle kodwa elinobuntu obuncane.
Ifakwe ikesi lewashi eliqinile, i-bezel inokuthungwa okuqinile, okunikeza iwashi a Ukumelana nomthelela omuhle, zivikele ngokuphepha izingxenye zomshini ngaphakathi.
Ngaphezu kwalokho, leli washi le-analogi liphethe ingilazi ye-Sapphire enobulukhuni obuphakeme kakhulu, evikela iwashi eliqinile emiphumeleni evamile.
Njengomkhiqizo weqoqo lika-Elio’s Spring Sunshine, iwashi le-quartz I-Elio EL028-01 Idizayinelwe ngebhande lesikhumba elilula, elihle elinombala ophinki wesifazane nobuhle. Leli washi lifana nesisetshenziswa semfashini esiphakamisa ubuhle obumnene babesifazane emicimbini yasemgwaqweni, emaphathini, njll.
Abasebenzisi bangaqinisekiswa ngokuphelele ngokuphila isikhathi eside kwewashi ngenxa yokunyakaza kwangaphakathi okukhiqizwa kulo Ubuchwepheshe baseJapane obuthuthukisiwe, ukuqinisekisa ukuthi iwashi lisebenza ngokunembile futhi linokuqina okuphezulu.
Akuyona nje ikhwalithi evela ngaphakathi kuphela, igobolondo langaphandle lewashi nalo liqine ngokwedlulele, lisiza ukunciphisa umonakalo obangelwa ukushayisana kwansuku zonke.
I-Elio Women’s Watch ES038-01 Ngomklamo wokuhlanganisa iketango elineziphetho ezimbili njengokugcizelela, ubuhlalu betshe bunamathiselwe ngokucophelela nangobuchule ukuze kuthuthukiswe ubuhle besifazane nobunhle bomuntu ogqokile.
Iwashi elincane, elihle elinobubanzi bobuso 25 mm nobubanzi bentambo 9 mm. Ibhande kanye ne-bezel zenziwe nge-alloy ehlala isikhathi eside, ukugqwala okuhle nokumelana ne-oxidation, ukusebenza kahle ezimweni eziningi zezulu ezahlukene.
I-Elio Women’s Watch ES063-02 inomklamo wobuso oyindilinga, intambo yokuluka elula kodwa evelele ngokulinganayo, iyisesekeli esiza ukuthuthukisa ubuhle obuhle bomuntu ogqokile. Lena futhi imodeli yomkhiqizo ethengiswa ngokukhethekile ku-Mitadoor Đồng Nai VN naku-Mobile World.
Nge-diameter yokudayela 32 mm, ububanzi bentambo 16 mm, leli washi lizofaneleka ngokwedlulele kumantombazane anezihlakala eziphakathi nendawo (isiyingi sesihlakala esingaphansi kuka-16.5 cm). Uhlaka oluqinile lwenziwe ngezinto eziqinile ze-alloy, ezinciphisa i-oxidation. Ibhande lensimbi engagqwali liqine ngokwedlulele futhi lihlala isikhathi eside.
Iwashi lifakwe ingilazi yamaminerali ebonisa ngale ukuze lisize abasebenzisi babone isikhathi ngokucacile. Ngaphezu kwalokho, iwashi le-Elio ES063-02 labesifazane nalo lihlanganiswe nekhalenda lezinsuku, likusiza ukuthi ulawule isikhathi ngokushesha futhi kalula.
Njengewashi elinomklamo oyinkimbinkimbi, Elio iwashi labesifazane ES035-01 inobuso bengilazi obuyindilinga obuyisisekelo, obufakiwe Uhlaka lwakhiwe ngamatshe athambile kakhulu, ifanele amantombazane amantombazane anesitayela.
Ngaphandle kwalokho, ibhande laleli washi le-quartz linomklamo wokugona ngesandla, owenziwe ngezinto ezinhle ezilwa nokugqwala, ezihlala isikhathi eside. Ukunyakaza kwangaphakathi kukhiqizwa ngokobuchwepheshe baseJapane obuthuthukisiwe, okunikeza iwashi ukuzinza nokunemba lapho lisebenza.
I-Elio Women’s Watch ES037-01 yomkhiqizo wewashi we-Elio, eyethulwe ekuqaleni kuka-2021 naseqoqweni le-Muse, enemiklamo nemiklamo emihle yamantombazane athambile, abesifazane.
Ibhande linomklamo we-criss-cross omise okwedayimane, owenziwe ngengxubevange ecwebezelayo, ohlinzeka ngokuqina okuphezulu kuso sonke isimo sezulu kanye nomonakalo olinganiselwe. Ngobubanzi bobuso 28 mm ububanzi bentambo efanayo 10 mm, ifanele abesifazane abanomjikelezo wesihlakala cishe 13 – 13.5 cm.
Imfashini nenhle yizimpawu zokuklanywa kwemoto I-Nakzen Women’s Watch SS4056L-7N0. Nge ingilazi engaphezu kuka-80% efakwe ama-rhinestone, ibhande elicwebezelayo lihlanganisa imibala engu-2 yegolide yethusi kanye nesiliva elimhlophe, elethe ukucwazimula kogqokile.
Akukhona nje ukuthi inhle ekwakhiweni, impahla yokubuka nayo yenziwa ngokukhethekile yinkampani lapho isebenzisa izinto zensimbi engagqwali, ikhulisa ukumelana kwayo ne-oxidation nokuthwala okuhle. Indawo yengilazi inobulukhuni obuphezulu, obala, okunciphisa inkinga yokuqhekeka lapho ingaphansi kwemithelela evamile.
1. ELIO ES050-01
30 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Ingxubevange China 13 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri – 551,000 iwinile849,000 iwinile (-35%)
2. ELIO ES058-01
28 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Insimbi engagqwali China 14 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri (2 izibuyekezo) 513,000 iwinile790,000 iwinile (-35%)
3. ELIO ES028-01
25 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Ingxubevange China 10 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri – 486,000 iwinile749,000 iwinile (-35%)
4. ELIO ES040-01
26 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Ingxubevange China 5 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri (1 isibuyekezo) 649,000 iwinile999,000 iwinile (-35%)
32 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Ingxubevange China 14 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri (3 izibuyekezo) 519,000 iwinile799,000 iwinile (-35%)
6. I-NAKZEN SL4043LREBN-7N0
28 mm Ingilazi yeSapphire Insimbi engagqwali Isikhumba sokwenziwa China 14 mm Cishe iminyaka emi-2 Ikhalenda lansuku zonke 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Japan Ibhethri (1 isibuyekezo) 700,000 iwinile1,078,000 iwinile (-35%)
7. ELIO EL028-01
33 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Isikhumba sokwenziwa China 12 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri – 538,000 iwinile829,000 iwinile (-35%)
8. ELIO ES038-01
25 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Ingxubevange China 9 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri – 629,000 iwinile969,000 iwinile (-35%)
9. ELIO ES063-02
32 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Insimbi engagqwali China 16 mm Cishe iminyaka emi-3 Ikhalenda lansuku zonke 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri – 708,000 iwinile1,090,000 iwinile (-35%)
10. ELIO ES035-01
26 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Insimbi engagqwali China 10 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri (1 isibuyekezo) 571,000 iwinile879,000 iwinile (-35%)
11. ELIO ES037-01
28 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Ingxubevange Ingxubevange China 10 mm Cishe iminyaka emi-3 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Vietnam Ibhethri – 571,000 iwinile879,000 iwinile (-35%)
12. I-NAKZEN SS4056L-7N0
32 mm Ingilazi yamaminerali (Amaminerali) I-Analogue (I-Analog) Insimbi engagqwali Insimbi engagqwali China 14 mm Cishe iminyaka emi-2 Akutholakali 3 ATM – Geza izandla, uhambe emvuleni Japan Ibhethri – 1,072,000 iwinile1,650,000 iwinile (-35%)
Uhlu lwamawashi abesifazane angempela, aziwa kakhulu anenani elingu-1 million:
Ngenhla kunendatshana emayelana namawashi wesifazane angempela ayi-12 anenani eliyisigidi, athandwa kakhulu abantu abaningi. Noma yimiphi imibuzo sicela ushiye amazwana ngezansi!
Điện thoại của bạn có làm được những điều này để cổ vũ cho U23 Việt Nam không